Turkiga oo talaabo lama filaan ah ka qaadanaya Xusuuqa Yahuudu ku hayso Shacabka FALASTIIN | shumis.net
Home » Wararka » Turkiga oo talaabo lama filaan ah ka qaadanaya Xusuuqa Yahuudu ku hayso Shacabka FALASTIIN
Turkiga oo talaabo lama filaan ah ka qaadanaya Xusuuqa Yahuudu ku hayso Shacabka FALASTIIN
Xukuumadda Waddanka Turkiga, ayaa kud dhawaaqday Saddex Maalmood oo Baroor Loogu samaynayo Falstiiniyiinta Xasuuqa lagu Hayo.
turkie Baroordiiqdan ayaa Xukuumadda Turkiga ku tilmaantay inay ku muujinayso sida ay uga xuntahay Xasuuqa Shacabka Falastiinitiinta ee Gaza oo hadda dhimashadda sii caga-cagaynayso 520-Maati u badan Caruur,Haween iyo waayeel.
Xukuumadda Turkiga ayaa noqonaya Wadamka kaliya ee Muslin ah oo go’aansaday 3-Maalmood in hoos loo dhigo Calanka Turkiga,waxaana arintan la filayaa inay soo dhaweeyeen Muslimiinta Caalamka oo Turkiga u arka inay tahay awood sanadihii ugu dambeeyay u soo baxay Caalamul islaami ah,inkastoo ay dhanka Masar
agoon ka noqdeen kadib markii la inqilaabay Madaxweynihii Masar Maxamed Morsi.
Arintan ayaa waxaa ka cadhooday Dawladda isreal oo u aragti Turkiga inuu indhaha Caalamka ku soo jeediyay,iyadoo baroordiiqadan ku soo aaday xili uu maanta uu Reysalwasaaraha Turkiga uu Isreal uu ku tilmaamay inay u dhaqmayaan sidii ninkii Hitler ee Jarmalka ahaa ee iyaga ciqaabay xasuuqayna 6-Malyan oo Yuhuud ah.
Title: Turkiga oo talaabo lama filaan ah ka qaadanaya Xusuuqa Yahuudu ku hayso Shacabka FALASTIIN